एन्ड्र्यू डेभिसका लेखहरू अन Martech Zone |
द्वारा लेखहरू एन्ड्र्यू डेभिस
एन्ड्र्यू मार्केटिंगका सीपीसी रणनीति निर्देशक हुन्। सेप्टेम्बर २०१० को अन्तमा, एन्ड्रयूले पहिलोपटक मर्चेन्ट तुलना शपिंग ह्यान्डबुक लेख्न समाप्त गरे जसले कसरी प्रभावकारी तुलना शपिंग अभियान सुरू र कसरी प्रबन्ध गर्ने भन्ने बारे विस्तृत विवरण प्रदान गर्दछ। आज एन्ड्रयू आफ्नो अधिकांश समय मध्यम र ठूला अनलाइन रिटेलरहरू र अनलाइन मार्केटिंग एजेन्सीहरूसँग परामर्श गर्दछन्, र साथै लेखन र निर्देशित गर्न सीपीसी रणनीति ब्लग.
हलिडे सीजन ग्लोरीको लागि लडाई - गुगल शपिंग बनाम अमेजन उत्पादन विज्ञापन Q4 मा
बिहीबार, फेब्रुअरी 21, 2013 एन्ड्र्यू डेभिस
तिनीहरू भन्छन् “तपाईको पैसा जहाँ राख्नु भयो त्यही राख्नुहोस्।” खैर, सडकमा शब्द, र शायद विश्वको हरेक सडक, यो हो कि गुगल र अमेजन तपाईंको पैसा कमाउनेहरू हुन् जब यो अनलाइन रिटेलको कुरा आउँछ। गुगल शपिंग र अमेजन उत्पादन विज्ञापनहरू निस्सन्देह दुई सबैभन्दा गतिशील, यातायात-भारी भुक्तानी तुलना शपिंग ईन्जिनहरू (CSEs) अवस्थित छन्। तर सबैलाई थाहा छ। के सम्भवतः थाहा छैन सीएसई जाइन्ट्सको भूमिगत तह हो:?
तपाइँ कसरी अनलाइन बेच्नु पर्छ
सोमबार, जनवरी 14, 2013 बिहीबार, जुन 18, 2015 एन्ड्र्यू डेभिस
तपाइँको वस्तुहरू अनलाइन कहाँ बेच्ने भनेर छनौट गर्नु तपाईंको पहिलो कार खरीद गर्नु जत्तिकै हुन सक्छ। के तपाई छनौट गर्नुहुन्छ तपाई के खोज्दै हुनुहुन्छ मा निर्भर गर्दछ, र छनौटहरूको सूची भारी हुन सक्छ। समुदाय ईकामर्स साइटहरूले ग्राहकहरूको धेरै फराकिलो नेटवर्कमा ट्याप गर्ने अवसर प्रस्ताव गर्दछन् तर उनीहरूले नाफाको ठूलो कटौती गर्छन्। यदि तपाईं छिटो बेच्न चाहानुहुन्छ र मार्जिनको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्न भने, तिनीहरू सायद तपाईंको उत्तम शर्त हुन सक्छन्।
बिहीबार, जुन 14, 2012 बिहीबार, जुन 14, 2012 एन्ड्र्यू डेभिस
सीपीसी रणनीतिले विभिन्न आकारका १०० भन्दा बढी अनलाइन रिटेलरहरूबाट डाटा संकलित गर्दछ, approximately.२ मिलियन क्लिकहरू र in मिलियन राजस्वमा उत्कृष्ट तुलना शपिंग इन्जिनहरू निर्धारण गर्न। तुलना शपिंग ईन्जिनले वेबसाइटहरू जस्तै प्राइसग्राबर, नेक्स्टैग, अमेजन उत्पाद विज्ञापन, शॉपिंग.कट, शपजिला र गुगल शपिंग समावेश गर्दछ। अध्ययनमा हामी इकमर्स व्यापारी यातायात, राजस्व, रूपान्तरण दर, बिक्री मूल्य, र प्रति क्लिक दरको लागि सबै भन्दा राम्रो शपिंग साइटहरू विश्लेषण गर्दछौं, र उनीहरूमा कुल जम्मा गर्दछौं।
बुधबार, डिसेम्बर 21, 2011 बिहीबार, जुन 18, 2015 एन्ड्र्यू डेभिस
अमेजन अब विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली खुद्रा स्रोतहरूको रूपमा खडा छ। लाखौं डाइ-हार्ड ग्राहकहरू र फ्यानहरूको साथ, यसले अन्य रिटेलरहरूलाई मात्र अफलाईन र अफलाईनमा चुनौती दिएको छ, तर सम्पूर्ण अनलाइन मार्केटिंग च्यानलहरू। अमेजनको सबैभन्दा नयाँ उत्पादन, किन्डल फायर, गत हप्ता केहि कडा कठोर आलोचना गरे। जेसुकै होस्, बिक्री अझै पनि राक्षसी देखिन्छ, १० लाख भन्दा बढी किन्डल (किन्डल फायर लगायत) एकाईहरू तेस्रो हप्ताको लागि प्रति हप्ता बिक्री हुने